ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - လိင်စွဲစွဲလမ်းမှုရောဂါ - ဝေဖန်သူများအားအကဲဖြတ်ခြင်း၊ ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့်တုန့်ပြန်ခြင်းအတွက်သက်သေအထောက်အထား (၂၀၁၅) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်တွင်
မှတ်ချက်များ- ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လထုတ်ထုတ်ဝေသောရောဂါအနေဖြင့်လိင်စွဲစွဲလမ်းမှုနှင့် ပတ်သတ်၍ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးစစ်ဆင်ခြင်း - ကုသခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာဂျာနယ်။ " ကျွန်ုပ်တို့သည်စက္ကူတစ်ခုလုံးကိုပုံတူကူးယူနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလိင်စွဲလမ်းမှုအပေါ်ဝေဖန်မှုများနှင့်စာရေးသူ၏တုံ့ပြန်ချက်များကိုကိုးကားချက်များပါရှိသည်။ အပြည့်အဝ-စာသားကို PDF ကိုမှ Link ကို.
စွဲလမ်းကုသမှု၏လမ်းကြောင်းသည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းလူမှုရေး၊ လက်တွေ့နှင့်သိပ္ပံဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများဖြင့်မှတ်သားထားသည်။ သိပ်မကြာခင်ကပင်စွဲလမ်းမှုကိုကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားသူအဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့ပြီးစွဲလမ်းမှုခံစားနေရသူများကိုပြင်းထန်သောစိတ်စွန်းကွက်မှုများ၊ ကြောက်ရွံ့မှုတို့ဖြင့်ကုသခံခဲ့ရသည်။ အရာတစ်ခုမှာထင်ရှားနေဆဲဖြစ်ပြီးသိသာထင်ရှားသည့်အပြောင်းအလဲကိုပြုလုပ်ရန်ခက်ခဲသည်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့်အပြောင်းအလဲကိုဖြစ်ပေါ်စေရန်စုပေါင်းအင်အားစုများ၏ဇွဲနှင့်အမြင်ကိုယူထားသည်။ စွဲလမ်းမှုသည်သမိုင်းကြောင်းအရမှားယွင်းစွာနားလည်ပြီးနားလည်မှုလွဲမှားသည့်ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏များပြားလှသောပုံစံများ၌တွေ့ရသော်လည်း၎င်းသည် ဦး နှောက်ဆု၊ လှုံ့ဆော်မှု၊ မှတ်ဉာဏ်နှင့်ဆက်စပ်မှု၏အဓိက၊ နာတာရှည်ရောဂါဖြစ်သည်ကိုအသိအမှတ်ပြုရန်လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၅၀ အတွင်းရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ဇီဝဗေဒ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, လူမှုရေးနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာ domains များတလျှောက်သရုပ်နှင့်အတူတိုက်နယ်။
လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောပြproblemနာအပြုအမူများကိုလက်ခံခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအငြင်းပွားဖွယ်ရာသည်အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုမှုတို့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောဖြစ်စဉ်နှင့်ဆင်တူသည်၊ သို့သော်နောက်ဆုံးပေါ်သိပ္ပံနည်းကျတိုးတက်မှုများနှင့်အတူတင်ပြသည့်အခါဝေဖန်မှုများသည်အခြေအမြစ်မရှိကြောင်းနှင့်ခေတ်နောက်ကျနေသည်။ ။
Bonnie Phillips ကa*, Raju Hajelab & Donald အယ်လ်ဟီလ်တန် JR ။c
အွန်လိုင်း Published: 09 ဇူလိုင် 2015
လိင်စွဲလမ်းနှင့်တုံ့ပြန်ချက်၏စားပွဲတင် 1 ဝေဖန်မှုများ
လိင်စွဲလမ်းစရာသိပ္ပံနည်းကျသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာစွဲ, လောင်းကစားစွဲခြင်း, အင်တာနက်စွဲလမ်းအဖြစ်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေအပေါ်သုတေသန, များစွာသောဘုံယန္တရားများရှိပါတယ်ထုတ်ဖေါ်ဖို့ဆက်လက်သိရသည်။ Sussman, အက်စ်, Lisha, N. , & Griffiths က, အမ် (2011) ။ အဆိုပါစှဲ၏ပျံ့နှံ့: အများစု၏ပြဿနာတစ်ခုသို့မဟုတ်လူနည်းစု? အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးပညာရပ်များ၊ ၃၄ နှစ်, 3-56 ။
စွဲလည်းရှိ (ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာ, လိင်, အရက်နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများကဲ့သို့) ဆုလာဘ်မှယခင်ထိတွေ့မှု၏မှတ်ဉာဏ်ပြင်ပတွေကိုတစ်ဇီဝဗေဒနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုမှဦးဆောင်ထိုကဲ့သို့သော, cortical နှင့် hippocampal ဆားကစ်နှင့်ဦးနှောက်ဆုလာဘ်စနစ်များအကြား neurotransmission နှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက် စွဲလမ်းစေအပြုအမူတွေအတွက်တဏှာနှင့် / သို့မဟုတ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုထွက်လာပါတယ်လှည့်။ ကယ်လီ၊ AE နှင့် Berridge, KC (2002) ။ စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးများမှဆက်စပ်မှု: သဘာဝအလျောက်ဆုလာဘ်၏ neuroscience ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ, 22 ၏ဂျာနယ်, 3306-3311 ။
လုံးဝနီးပါးစွဲအပေါ်တိုင်းလေ့လာမှုဦးနှောက်မျိုးစုံဒေသများ, တိုကျရိုကျကုသိုလ်ကံထိန်းချုပ်မှုနှင့်အကျိုးကို-salience စင်တာများနှင့်ဆက်စပ်အထူးသဖြင့်သူတို့၏အမျိုးအကျုံ့သရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးထိုကဲ့သို့သောကင်းရန်အဖြစ်စှဲ, စိတ်ကြွဆေးနှင့် opioids အဘို့နှင့်လည်းထိုကဲ့သို့သောအစားအစာ, လိင်, နှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းအဖြစ်သဘာဝကဆုလာဘ်နှင့်အပြုအမူ၏ရောဂါဗေဒ overconsumption နှင့်ဆက်စပ်အပြုအမူအခြေအနေများအဘို့အမှန်သည်။ ဟီလ်တန် DL (2014) ။ မြင့်မားသောအလိုဆန္ဒ, ဒါမှမဟုတ် "မျှသာ" တစ်ခုစွဲ? Steele et al အားတုံ့ပြန်မှု။ Socioaffective အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်စိတ်ပညာ, 4, 23833 ။
လတ်တလောလေ့လာမှုများတွင်ညစ်ညမ်းစွဲသောသူတို့၏အရက်သမားသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးစွဲအဖြစ်အလားတူဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုပြသခဲ့သည်။ ဦးနှောက် Scan ဖတ်ဦးနှောက်အတွက်ဆုလာဘ်စင်တာများတစ်ခုအရက်သမားမိတ်ဆွေတစ်ဦးကိုမြင်လျှင်အပေါ်အရက်လောင်ခြင်းငှါ, တူညီသောလမ်းအတွက်အကဲဆတ်သောပစ္စည်းကိုမြင်လျှင်မှတုံ့ပြန်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ Voon, V. , မှဲ့, တီဘီ, BANCA, P. , Porter, အယ်လ်, မောရစ်, အယ်လ်, Mitchell က, အက်စ်, ... Irvine, အမ် (2014) ။ အာရုံကြောနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေမပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ cue reactivity ကို၏ဆက်နွယ်နေပါသည်။ PloS One ကို, 9, e102419 ။
စွဲလမ်းတဲ့ကျယ်ပြန့်စိတ်ကူးထောက်ပံ့သက်သေအထောက်အထားထွန်းသစ်စသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, neurobiological သုတေသနစွဲလမ်းမမှန်လွတ်လပ်သောမဖြစ်အံ့သောငှါအကြံပြု: တစ်ဦးချင်းစီအပြင်ထူးခြားသောစွဲလမ်းရောဂါတူညီသောနောက်ခံစွဲလမ်း syndrome ရောဂါ၏အဖျက်စကားရပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ အလွန်အကျွံစား, လောင်းကစား, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနှင့်စျေးဝယ်နှငျ့ပတျသကျသောမကြာမီကသုတေသနလည်းစွဲလမ်းတ္ထုများအပေါ်လက်ရှိအာရုံစိုက်လုံလောက်စွာဇာစ်မြစ်, သဘောသဘာဝများနှင့်စွဲလမ်း၏လုပ်ငန်းစဉ်များဖမ်းယူတော်မမူကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ Shaffer, HJ, LaPlante, DA, LaBrie, RA, Kidman, RC, Donato, AN, & Stanton, MV (2004) ။ အကွိမျမြားစှာအသုံးအနှုနျးမြား, ဘုံ etiology: တစ် syndrome ရောဂါစွဲ၏မော်ဒယ်ဆီသို့။ စိတ်ရောဂါကုသမှု, 12 ၏ဟားဗတ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 367-374 ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအာရုံစိုက်ဘက်လိုက်မှုအကဲဖြတ်နှင့်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှိုင်းယှဉ်ပါကအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူသူတို့အားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအာရုံစိုက်ဘက်လိုက်မှုတိုးမြှင့်ပြီထင်ရှားခဲ့သည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာ-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာ-related တွေကိုမှအလိုအလျှောက်တိုက်ရိုက်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖို့စိတ်သဘောထားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုကလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ဓာတုစွဲအကြားအခြားသိပ္ပံနည်းကျ link ကိုပေးစွမ်းသည်။ Mechelmans, DJ သမား, Irvine, အမ်, BANCA, P. , Porter, အယ်လ်, Mitchell က, အက်စ်, မှဲ့, တီဘီ, ... Voon, V. (2014) ။ နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေမပါဘဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုဦးတည် Enhanced အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု။ PloS One ကို, 9, e105476 ။
အများစုမှာသိပ္ပံပညာရှင်များလိင်စွဲလမ်း၏အယူအဆကိုငြင်းပယ်ကြပါပြီ။ 1996 အတွက်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်အတွက်ကဲန် Blum ရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲဒါပေမယ့်လည်းလောင်းကစားဝိုင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှင့် compulsive ကျော်အပါအဝင်အခြား compulsive အပြုအမူတွေ, သာထည့်သွင်းမယ့်ဆုလာဘ်ချို့တဲ့ရောဂါဖော်ပြခဲ့သည်။ သူကနောက်ပိုင်းမှာအဓိကအားအကျိုးကို circuitry အတွက် neurochemical ပြောင်းလဲမှုများအဆငျ့ဆငျ့ကိုပါဝင်ပတ်သက်နေသည့် neuroplasticity တစ်ဦးရောဂါဗေဒပုံစံအဖြစ်လိင်စွဲဖော်ပြခဲ့သည်။ Blum, K. , Cull, JG, Braverman, ER, & Comings, DE (1996) ။ ဆုလာဘ်ချို့တဲ့ရောဂါ။ အမေရိကန်သိပ္ပံပညာရှင်, 132-145 ။
နှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့, ကျွမ်းကျင်သူများသာအရက်နှင့်အစွမ်းထက်မူးယစ်ဆေးစွဲစေနိုင်ကြောင်းယုံကြည်သည်။ Neuroimaging နည်းပညာများနှင့်ပိုပြီးမကြာသေးမီကသုတေသနပြုသို့သော်ထိုကဲ့သို့သောလောင်းကစားဝိုင်း, စျေးဝယ်ခြင်း, လိင်, အဖြစ်အခြို့သောပျြောမှေ့စလှုပ်ရှားမှုများလည်းဦးနှောက်ကို Co-ရွေးချယ်နိုင်သောပြသခဲ့ကြသည်။ Goldstein, RZ, & Volkow, ND (2011) ။ စွဲလမ်းအတွက် prefrontal cortex ၏ကမောက်ကမဖြစ်မှု: တွေ့ရှိချက်များနှင့်လက်တွေ့သက်ရောက်မှု neuroimaging ။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ, 12 Reviews, 652-669.25 ။
Grant, JE, Potenza, MN, Weinstein, အေ, & Gorelick, DA (2010) ။ အမူအကျင့်စွဲနိဒါန်း။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်အလွဲသုံးမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်, 36, 233-241 ။
, အစားအစာသို့မဟုတ်ဘိန်းဖြူ, မေတ္တာသို့မဟုတ်လောင်းကစားများ၏ဝန်ဆောင်မှုအတွက်, dopamine တစ်မြိုင်ဖြစ်ပေါ်လာသောရှိမရှိကတော့အာရုံကြောဇာတိပကတိ၌ခြေရာတစ်လိုင်း။ ထိုခြေရာများခိုင်မာစေခြင်းနှင့် indelible ဖြစ်လာ, ရွှေတစ်အလွန်အမင်းအထူးပြုနှင့်ကန့်သတ်အိုးတစ်ခုမထိနျးခြုပျနိုငျလမ်းကြောင်းကိုရိုက်နှက်။ Lewis က, အမ် (2011). တစ်ခုစွဲကဦးနှောက်၏ကိုယျတှေ့မှတျတမျးမြား: A အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်မူးယစ်ဆေးဝါးများအပေါ်သူ့ယခင်ဘဝကို examine။ , နယူးယောက်, NY: ပြည်သူ့ရေးရာ။
Shaffer, HJ, LaPlante, DA, LaBrie, RA, Kidman, RC, Donato, AN, & Stanton, MV (2004) ။ အကွိမျမြားစှာအသုံးအနှုနျးမြား, ဘုံ etiology: တစ် syndrome ရောဂါစွဲ၏မော်ဒယ်ဆီသို့။ စိတ်ရောဂါကုသမှု, 12 ၏ဟားဗတ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 367-374 ။
ဒေါက်တာအဲရစ် Nestler, New York မှာသိနာတောင်ပေါ် Medical Center မှ neuroscience သုတေသန၏ဦးခေါင်းနှင့်လောကရှိအများဆုံးလေးစားဖွယ်စွဲသိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးသည်တစ်ဦးကိုစက္ကူပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ် ခေါင်းစဉ် 2005 တှငျ "စွဲလမ်းတစ်ဘုံလမ်းကြောင်းရှိပါသလား" ဒီစက္ကူခုနှစ်တွင်သူသည် dopamine ဆုလာဘ်စနစ်များကိုဖော်ပြထားသည်။ သာမူးယစ်ဆေးစွဲဖျန်ဖြေ, ဒါပေမယ့်လည်းထိုကဲ့သို့သောရောဂါဗေဒကျော်, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲအဖြစ် "သဘာဝစှဲ" (ကြောင်း, သဘာဝဆုလာဘ်၏ compulsive စားသုံးမှုဖြစ်ပါတယ်) ။ Nestler, EJ (2005) ။ စွဲလမ်းတစ်ဘုံမော်လီကျူးလမ်းကြောင်းရှိပါသလား? သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ, 8, 1445-1449 ။
လိင်စွဲလမ်းစရာစညျးလုံးချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်သို့မဟုတ်အဖြေရှာတဲ့စံရှိပါသည်။ သဘောထားကွဲလွဲသည့် nomenclature (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ, hypersexuality) အားအဖြစ်ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သော်လည်းအများအပြားအမြင်များကိုဖြတ်ပြီးသုတေသီများဆက်စပ်ဖြစ်ရပ်များ၏ဖော်ပြချက်ပတ်သတ်ပြီးနှင့်အတူအတော်လေးကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။ စာပေမဟုတ်ရင်အရတော့ဖြစ်သကဲ့သို့, ငါတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏ဆောက်လုပ်ရေးကျိုးကြောင်းဆီလျော်တိကျတိုင်းတာခြင်းဆိတ်ကွယ်ရာ etiological သီအိုရီမဆိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမှဖြစ်နိုင်သောဖြစ်သင့်ကြောင်းအခိုင်အမာ။ အဆိုပါ SAST-R ကိုအပေါ်မြင့်တက်နှင့်အတူတင်ပြကုသမှု-ရှာကြံတစ်ဦးချင်းစီအကြားတွေ့ရှိရအဖြေရှာတဲ့စံ၏မြင့်ပျံ့နှံ့နှုန်းအဆိုပြုထားစံလိင်စွဲလမ်းများအတွက်ကုသမှုများအတွက်တင်ပြတစ်ဦးချင်းစီမှအလွန်အမင်းသက်ဆိုင်သောဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ Carnes, PJ, Hopkins, TA, & Green, BA (2014) ။ အဆိုပါလိင်စွဲလမ်းစစ်ဆေးခြင်းစမ်းသပ်-Revised မှဆက်ဆံရေး: အဆိုပြုထားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲရောဂါရှာဖွေစံ၏လက်တွေ့ဆက်စပ်မှု။ စွဲလမ်းဆေးပညာ, 8 ၏ဂျာနယ်, 450-461 ။
တစ်ဦး atheoretical ရှုထောင့်ကနေကြည့်ရှုအားပေးသည့်အခါစာပေအတွက်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အရတော့စံရှိပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်သင်ကခေါ်ပေမယ့်အရာပစ္စုပ္ပန်ကိစ္စရပ်များကိုအဆိုပါအပြုအမူအပေါ်သဘောတူညီမှုလည်းမရှိ။ Carnes, PJ, Hopkins, TA, & Green, BA (2014) ။ အဆိုပါလိင်စွဲလမ်းစစ်ဆေးခြင်းစမ်းသပ်-Revised မှဆက်ဆံရေး: အဆိုပြုထားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲရောဂါရှာဖွေစံ၏လက်တွေ့ဆက်စပ်မှု။ စွဲလမ်းဆေးပညာ, 8 ၏ဂျာနယ်, 450-461 ။
အဆိုပါကိစ္စကိုလိင်စွဲမဟုတ်ဘဲနောက်ခံကိစ္စများမဟုတ်ပါ။ ဤဆင်ခြေအပြုအမူတွေထက်နောက်ခံရောဂါဖြစ်စဉ်များကိုအာရုံစိုက်ဖို့ရောက်နေပါတယ်။ လိင်စွဲလမ်းများ၏အကြောင်းရင်းအဖြစ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမမှန်အာရုံစိုက်တဲ့သူတချို့ကအမည်းစက်နှင့်ဘေးဖယ်ထားဖို့ဖြည့်စွက်ထားပါသည်။ Leshner, AI အ (1997) ။ စွဲလမ်းနေတဲ့ဦးနှောက်ရောဂါဖြစ်ပါသည်, ထိုသို့အရေးပါပါတယ်။ သိပ္ပံ, 278, 45-47 ။
လိင်စွဲလမ်းနေတဲ့အကျိုးအမြတ်များနှင့်စည်းကမ်းတစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ လိင်ကိစ္စသည်အကျိုးအမြတ်များပြီးစည်းကမ်းမကျသည့်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်လုပ်ငန်းကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်ငွေကြေးပိုမိုသုံးစွဲခြင်းဖြင့်လူတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များသည့်အပြင်ကုသမှုလုပ်ငန်းမှထိရောက်စွာပညာတတ်ရန် ကျန်းမာသောလိင်နှင့်လိင်နှင့်အပြာစာပေရုပ်ပုံများပါဝင်သောစွဲလမ်းမှုပြproblemsနာများနှင့်ပတ်သက်ပြီးလူများ။ ဒီကနေ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်မိန်းမများအပေါ်မှားယွင်းစွာပါ ၀ င်မှုနှင့်ကျူးကျော်မှုများကိုတွန်းအားပေးကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများအရလိင်စွဲလမ်းမှု၏စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့လက်ခံမှုကိုဝေဖန်သူများကဆန္ဒပြရန်သို့မဟုတ်စိုးရိမ်စရာမလိုဘဲဤနေရာတွင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကွဲပြားမှုရှိသည်။ Bridges, AJ, Wosnitzer, R. , Scharrer, အီး, Sun, C, & Liberman, R. (2010) ။ ရောင်းအားအကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများအတွက်ကျူးကျော်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: တစ်ဦးကအကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ update ကို။ အမြိုးသမီးမြား, 16 အကြမ်းဖက်မှု, 1065-1085 ။ Hilton ဂျူနီယာ, DL, & Watts, C. (2011) ။ ညစ်ညမ်းစွဲမြား: A မှ neuroscience ရှုထောင့်။ ခွဲစိတ် Neurology အင်တာနေရှင်နယ်, 2.
ရောဂါလိင်စွဲ Calling မကောင်းတဲ့အပြုအမူတစ်ခုဆင်ခြေအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတာဝန်ကွာကြာပါတယ်။ စွဲလမ်း၏ရောဂါမော်ဒယ်လက်ခံခြင်းမဟုတ်ဘဲပုဂ္ဂိုလ်ရေးတာဝန်ယူသှားပါဘူးဒါကြောင့်လူတစ်ဦးချင်းစီစွဲလမ်း၏, ဇီဝဗေဒစိတ်ခံစားမှု, ဝိညာဉ်ရေးရာနှင့် relational သက်ရောက်မှုနားလည်နှင့်သင့်လျော်အရေးယူခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါဟာပြဿနာကျွန်တော်တို့ရဲ့စုပေါင်းငြင်းပယ်လျော့ကျခြင်းနှင့်ထိရောက်သောကုသမှုတုံ့ပြန်မှုတိုးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုမကောင်းတဲ့အပြုအမူဖြစ်ပေါ်လာသောအမှန်တကယ်တစ်မျိုးဗီဇအခြေခံများနှင့်ရှင်သန်မှုများအတွက်လှုံ့ဆျောမှုအဖြစ်သဘာဝဆုလာဘ်, အဓိကအားဖြင့်အစားအစာနှင့်လိင်, အဲဒီမှာကြောင်းဦးနှောက်ဆုလာဘ်အတွက်ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေရလဒ်တွေကို, လှုံ့ဆျောမှု, မှတ်ဉာဏ်နှင့်ဆက်စပ် circuitry ရှိကြောင်းဦးနှောက်ရောဂါအားဖြင့်မောင်းနှင်သည်။ ကြောင်းထပ်မံသက်ရောက်မှု, ဇီဝဗေဒစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, လူမှုရေးနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာ domains များဟာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုနားလည်ခြင်းအမှန်တကယ်ပြန်လည်နာလန်ထူ၌ သာ. တာဝန်ရှိနှင့်တာဝန်ခံဖြစ်ခြင်းများအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတာဝန်အားပေး။ Wilson, WA, & Kuhn, CM (2005) ။ ဘယ်လိုစွဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုလာဘ် system ကိုပြန်ပေးဆွဲ။ Cerebrum, 7, 53-66 ။ Kauer, JA, & Malenka, RC (2007) ။ Synaptic plasticity နှင့်စွဲလမ်း။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ, 8 Reviews, 844-858 ။